पुरुषहरूको लागि छोटो दाह्री शैली | स्टाइलिश पुरुषहरू
एलिसिया टोमेरो | 03/01/2022 23:30 | काटिएको, व्यक्तिगत हेरचाह, प्रचलनहरू
यस वर्ष 2022 को लागि छोटो दाह्री प्रवृति सेट गर्न जारी छ। रहन्छ पुरुषत्व को संकेत र त्यहाँ पुरुषहरू छन् जो प्रयास गर्न र यो शैली कायम राख्न प्रतिबद्ध छन्। छोटो दाह्री पाउन गाह्रो छैन, तर तपाईले यसलाई कसरी कायम राख्ने भनेर जान्नुपर्दछ कि यसको लम्बाइ हो र यो स्थिर रहन्छ।
कटौती धेरै विविध छन् र यो सधैं सबै मोडेल जान्न राम्रो छ ताकि हामी छनोट गर्न सक्छौं अनुहारको आकारमा सबैभन्दा राम्रोसँग मिल्ने। दाह्री लगाउन मन पराउने मानिसको लागि, तपाईंले हामीले तल देखाउने सबै शैलीहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
1 सरल र प्राकृतिक दाह्री
2 छोटो र फ्रेम गरिएको दाह्री
3 भ्यान डाइक काटियो
5 चिन पट्टा संग दाह्री
6 शेभरन जुँगाको साथ धेरै छोटो दाह्री
7 क्लासिक जुँगा संग धेरै छोटो दाह्री
8 बाख्राको चिन
9 छोटो दाह्री कसरी हेरचाह गर्नुपर्छ?
सरल र प्राकृतिक दाह्री
यसको आकार र वृद्धि प्राकृतिक छ, दाह्री २ र ३ सेन्टिमिटरको बीचमा नबढेसम्म केही दिन पर्खनुहोस्। यो आफ्नो दाह्री को आकार जाँच गर्न र यो तपाईं मा राम्रो देखिन्छ कि हेर्न को लागि सबै भन्दा राम्रो तरिका हो। उही वृद्धिले निर्धारण गर्नेछ कि यो जनसंख्या भएको क्षेत्रहरू सही ढाकिएको छ वा यदि यसलाई केहि टच-अपहरू आवश्यक छ। यस प्रकारको दाह्री सबैभन्दा सरल र त्यसैले हो सबै हेयरस्टाइल शैलीहरू फिट हुन्छकपाल नभएका पुरुषहरूको लागि पनि।
छोटो र फ्रेम गरिएको दाह्री
यस प्रकारको दाह्री लगाउन मन पराउने पुरुषहरूको लागि हो छोटो र सफा। यसको लम्बाइ धेरै लामो छैन (०.५ र ०.९ सेन्टिमिटरको बीचमा) र यसलाई यसको सबै आकृतिहरू धेरै सफा र समान स्तरमा राखेर परिभाषित गरिएको छ। यसको रूप हो सफा र आकृति र यसलाई प्रत्येक हप्ता तपाईको ट्रिमरसँग टच-अप चाहिन्छ।
भ्यान डाइक काटियो
यो कटले तपाईंलाई विशिष्ट पियर्स ब्रोसनन वा जोनी डेप दाह्रीको सम्झना दिलाउने निश्चित छ। उनको दाह्री घटेको छ एक क्लासिक जुँगा र एक विशिष्ट बाख्रा, अनियमित दाह्री भएका वा आफ्नो अनुहारलाई रूपरेखा बनाउन चाहने पुरुषहरूको लागि उत्कृष्ट विकल्प। तपाईंको प्रोफाइलले तिनीहरूलाई मद्दत गर्नेछ जबडा उजागर र आफ्नो उपस्थिति धेरै बनाउनुहोस्।
यो एक सुरुचिपूर्ण संग आफ्नो अनुहार पुन: सिर्जना गर्ने तरिका हो दाह्री काटेर दुई भागमा विभाजन गरियो। दाह्री चिन्ह लगाइएको छ र यसको सही लम्बाइमा बढेको छ, तर जुँगाको भाग, यद्यपि यो लामो पनि छ, बाँकीसँग जोडिने छैन। यो शैली "एंकर दाढी" फारमको भाग हो, जहाँ हामी रोबर्ट डाउनी जूनियर जस्ता प्रसिद्ध अनुहारहरू भेट्न सक्छौं।
चिन पट्टा संग दाह्री
यसको कट र परिभाषा स्टाइलिश र साहसी हुन चाहने पुरुषहरूको लागि हो। उनको दाह्री छ साँघुरो र पट्टा आकार जुन छेउदेखि छेउसम्म चिनभरि दौडिन्छ, प्रत्येक पिनबाट सुरु हुन्छ। यो बङ्गारा र चिउँडो को सम्पूर्ण भाग को माध्यम बाट जानु पर्छ, र यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ वा यो जुँगा को भाग संग जोड्न सकिन्छ, यद्यपि ती सामान्यतया क्षेत्रहरु छन्। पूर्ण रूपमा अलग र स्वतन्त्र।
शेभरन जुँगाको साथ धेरै छोटो दाह्री
यो जुँगा पक्कै पनि वर्षौंदेखि बेवास्ता गरिएको छैन। यो प्रतीकात्मक जुँगा हो जसले रानीको गायक फ्रेडी मर्करीलाई चित्रण गर्दछ, एकदम बाक्लो र चौडा आकारको र मुखको माथि र नाकको तल अवस्थित छ।
जुँगा र दाह्रीका सबै प्रवृतिहरूको साथ, तिनीहरूको आकार अझै पनि एक हो जसले 80 को फेसनलाई चिन्ह लगाउँछ र अब यसले यसलाई सानो रंग दिइरहेको छ। यो एक बाक्लो र बलियो उपस्थिति छ जुन धेरै छोटो दाह्री संग छ वा छैन, निस्सन्देह एक क्लासिक।
क्लासिक जुँगा संग धेरै छोटो दाह्री
छोटो दाह्रीको अर्को शैली एक अद्वितीय जुँगाको साथमा पाइन्छ, तपाईं गोलाकार टिप्सको साथ सबैभन्दा अनौठोमा पनि शर्त लगाउन सक्नुहुन्छ, वा यसलाई घना होस् भनेर बढ्न अनुमति दिइएको छ।
जुँगालाई क्लासिक "स्टेच" को रूपमा पनि उब्जाउन सकिन्छ। यो सबैको क्लासिक हो जहाँ यसलाई प्राकृतिक रूपमा बढ्न अनुमति दिइएको छ, तर अत्यधिक वृद्धि बिना। यदि आवश्यक छ भने, एक सानो टच-अप गरिनेछ र दाह्री बढाउन अनुमति दिइनेछ, तर धेरै छोटो लम्बाइको साथ, ताकि जुँगा बाहिर खडा होस्।
छोडेको चिन चिउँडोमा पर्याप्त ठूलो छ झुण्ड्याउन र बाख्राको चिनको नाम अपनाउन सक्षम हुन। लुगा लगाउन सकिन्छ एकदम छोटो दाह्री संग, जहाँ तपाईं यसलाई निश्चित लिनु पर्छ। तपाईंले भर्खरै यो निर्धारण गर्नु पर्छ कि तपाईंले चिन छोड्न चाहानु भएको कत्ति चौडा चाहनुहुन्छ।
छोटो दाह्री कसरी हेरचाह गर्नुपर्छ?
यदि यो पहिलो पटक हो कि तपाइँ दाह्री बढाउन जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईले चाहानु भएको नतिजा वा के आशा गर्न सक्नुहुन्न भावना असहज देखिन्छ। पहिलो पटक पूरा दाह्री राख्नु लगभग असम्भव मामला हुन सक्छ, त्यसैले तपाईंले पूरा दाह्री पाउन लामो समय कुर्नुपर्नेछ।
ताकि त्यहाँ चिलाउने बिना बढ्छ एक विशेष तेल जसले यसलाई चिल्लो र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्नेछ। दाह्री छोटो राख्नु भनेको धैर्य र मर्मतको आवश्यकता हो, राम्रो ट्रिमर यसले तपाईको कार्यलाई धेरै सजिलो बनाउनेछ। छालामा हाइड्रेसन राख्न र नरम कपाल पाउनको लागि तपाईंले राम्रो कन्डिसनर वा तेलमा लगानी गर्नुपर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » व्यक्तिगत हेरचाह » पुरुषहरूको लागि छोटो दाह्री शैलीहरू
केराटिन के हो र यो के को लागी हो?